विना मगरको क्षेत्रमा माओवादीको जित, पोतिलाल बने बेलौरी नगरप्रमुख - Everest Dainik - News from Nepal
विना मगरको क्षेत्रमा माओवादीको जित, पोतिलाल बने बेलौरी नगरप्रमुख
कञ्चनपुर, असार २२ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ।
बुधबार राति अबेर सम्पन्न मत गणनाको घोषित परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रका पोतिलाल चौधरी ६७६४ मत ल्याई नगरप्रमुख पदमा विजयी भएका हुन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका पल्लवराज भट्टले ६ हजार ४०७ तथा कांग्रेसका हरेन्द्र विष्टले ५ हजार ४१२ मत प्राप्त गरे। उपप्रमुख पदमा भने नेकपा एमालेले जित हात पार्‍यो।
एमालेकी चित्रा चौधरी ६ हजार ७४८ मत ल्याएर विजयी भइन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रकी राधा कंडेलले ६१६१ तथा कांग्रेसकी खिना भण्डारीले ५ हजार ६२७ मत प्राप्त गरे। नगरपालिकाको वडा नं. १,५,६ र १० मा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
वडा नं २, ४, ८ र ९ मा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। ३ नम्बर वडामा भने कांग्रेसले जित हात पारेको छ। कुल २९३७७ मतदातामध्ये मतदानका क्रममा २३१२४ मत खसेको थियो। यो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीसमेत रहेकी नेतृ विना मगरको निर्वाचन क्षेत्र हो। बेलौरी कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ मा पर्दछ। विना यस क्षेत्रकी इञ्चार्जसमेत हुन्। यद्यपी उनको माइती घर भने पुनर्वास नगरपालिकामा पर्छ।
याे पनि पढ्नुस व्यवस्थित शहर बनाउने नीतिसहित भीमदत्त नगरपालिकाले ल्यायो एक अर्ब बजेट
ट्याग्स: kanchanpur, Local Body elction